पसिना गन्हाउने समस्या छ ? यसबाट छटकारा पाउन यी उपाय अपनाउन सकिन्छ – News Nepali Dainik
पसिना गन्हाउने समस्या छ ? यसबाट छटकारा पाउन यी उपाय अपनाउन सकिन्छ
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०३, २०७७ समय: २०:४८:५८
शारीरिक परिश्रम गर्दा वा खेल्दा उफ्रदा पसिना आउने हुनाले दिनहुँ नुहाउने तथा लुगा परिवर्तन गर्ने सामान्य उपाय हुन् । अत्यधिक पसिना आइरहन्छ भने सुत्ने वेलामा पसिना प्रतिरोधी (एन्टी–पस्र्पिरेन्ट) लगाउने । बिहान नुहाएपछि लगाइएको एन्टी–पस्र्पिरेन्ट फेरि आउने पसिनाले बगाइदिन सक्छ ।
गन्ध प्रतिरोधक (डियोडोरेन्ट)ले पसिना आउन रोक्न सक्दैन । यसले गन्धलाई छोप्न मात्र सक्छ । कतिपय राम्रा एन्टी–पस्र्पिरेन्टमा डियोडोरेन्ट पनि मिलाइएको हुन्छ । यस्तो प्रोडक्टबाट पसिना नियन्त्रण र गन्धनिरोध दुवै काम लिन सकिन्छ । आजकाल पसिना नियन्त्रक चक्की पनि बनेका छन् ।
गर्मीमा शरीरबाट पसिना आउनु आफैंमा राम्रो कुरा हो तर यसले शरीर दुर्गन्धित चाहिँ बनाइदिन्छ । पसिनाको दुर्गन्ध हटाउन पर्फ्युमको प्रयोग गर्न त हुन्छ तर त्यसको गन्ध केही समयपछि हराएर जान्छ । यहाँ हामी घरेलु तरिका अपनाएर पसिनाको दुर्गन्धबाट छुटकारा पाउने उपाय बताउने कोसिस गर्ने छौंं ।
यस्ता छ्न ती घरेलु उपाए हेर्नुहाेसः १.बेकिङ सोडाको प्रयोग :- पसिनाको दुर्गन्धबाट छुटकारा पाउनका लागि बेकिङ सोडा प्रभावकारी वस्तु हो । यसमा कागतीको रस राखेर पेस्ट बनाएर काखीमुनि दल्दा दुर्गन्ध भाग्छ । दश मिनेटसम्म पेस्टलाई रहन दिएर सफा पानीले काखी धुनुहोला ।
२. रोजवाटरको प्रयोग :- छालाका लागि रोजवाटर लाभदायक हुन्छ । एक जग पानीमा रोजवाटर राखेर त्यसमा कागतीको रस पनि राख्नुस् । अनि त्यसलाई काखीमुनि दल्नुस् । यसले पसिनाको दुर्गन्ध हटाइदिन्छ ।
३.पानको पात र अमलाको प्रयोग :- पानको पात र अमलालाई पिँधेर पेस्ट बनाउनुस् । त्यस पेस्टलाई काखीमा १० मिनेटसम्म राख्नुस् । अनि ताजा पानीले धुनुहोस् ।
४. आलुको प्रयोग :- आलु काटेर काखीमुनि केही समयसम्म दलिरहनुभयो भने पनि दुर्गन्ध हटाउन सहयोग गर्द्छ ।शरीर गन्हाउन नदिन अन्य उपाएहरु यस्ता छन :-
काखीलाई सुक्खा राख्ने, त्यहाँका रौँ फाल्ने , साथै मलमूत्रद्वार वा गुप्तांग क्षेत्रमा पनि सरसफाइमा ध्यान दिने । ब्याक्टेरिया सुक्खा ठाउँमा जागृत हुन नसक्ने हुनाले ती स्थानलाई सुक्खा र सफा राखिरहनुपर्छ । काखीमा डियोडोरेन्ट लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
नुहाइसकेपछि काखीमा नियमित रूपले फिटकिरी दल्ने गर्दा गन्ध पूरै हराउँछ । एक चम्चा ‘हाइड्रोजिन पेरोक्साइड’ भनिने ब्याक्टेरियानाशक तरल पदार्थलाई एक गिलास पानीमा घोलेर तौलियाले शरीरका गन्ध आउने भागमा दल्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा पनि गन्ध पैदा गर्ने ब्याक्टेरिया नष्ट भई गन्ध हराउँछ ।
Last Updated on: February 15th, 2021 at 8:48 pm
१७०६ पटक हेरिएको